डीभी परेर अमेरिका पुगेका भरत कहिल्यै नफर्किने गरी सधैका लागि अस्ताए ! – Dainik Sangalo
डीभी परेर अमेरिका पुगेका भरत कहिल्यै नफर्किने गरी सधैका लागि अस्ताए !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १५, २०७८ समय: १४:०१:२६
अलबिदा भतिज भरत ओली । यो दु:खद खबरले स्तब्ध छु ।
केहि दिन अघि हाम्रो कुरा भएको थियो । सबै ठिकठाकै थियो तर अकस्मात नि’धनको खबरले म’र्माहत बनायो ।
जिन्दगी भन्नु नै के रहेछ र ? थाहा छैन कुन दिन कुन रात अन्तिम हुने हो ।
अचम्म लाग्यो अझै विश्वास गर्न सकि रहेको छैन । भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली भतिज !
दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना ।
हाम्रो भोतिक कंगालपन हाम्रो बैचारिक कंगालपनको प्रतिबिम्ब मात्र हो।हामी यति कंगाल छौ कि आफ्ना पुर्बजहरुले कमाईदिएको अमुल्य मणिलाई, नचिनेर ढुङगा सरह ठान्छौ। त्यसको ज्वलन्त उधाहरण हो “दशा”
चीनमा अहिलेसम्म ८५ हजार ४५० रहेको छ भने ४ हजार ६३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप १ हजार ३२९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ६४ हजार ६९ पुगेको छ । यो कुल संक्रमितको ७३.७ प्रतिशत हो ।यसैबीच हालको अवस्थामा उपचाररत संक्रमितको संख्या २२ हजार २१९ रहेको मन्त्रालयले
Last Updated on: October 1st, 2021 at 2:01 pm